Waa kuma Ernest Bai Koroma? | KEYDMEDIA ONLINE
Waa kuma Ernest Bai Koroma?
Waa kuma shakhsiga loo qorsheynayo in Midowga Afrika usoo magacaabaan ergayga gaarka ah ee dhexdhexaadinta Soomaaliya loogu talagalay.
MUQDISHO, Soomaaliya - Ilo diblomaasiyeed oo ku dhow Midowga Afrika ayaa sheegaya Madaxweynihii hore ee Siralyoon Ernest Bai Koroma laga yaabo inuu noqdo Ergeyga gaarka ah ee Midowga Afrika u soo magacaabayo dhex dhexaadinta dhinacyada siyaasadda Soomaaliya, si wadar ogol iyo isu tanaasul looga heshiiyo doorashada.
Shirkii shalay ay yeesheen Golaha Amniga iyo Nabadda ee Midowga Afrika ee looga hadlayay xaaladda Soomaaliya ayaa laga soo saaray 14 qodob, waxaana kamid ahaa in Ergay sare loo soo magacaabo arrimaha Soomaaliya si uu udhexdhexaadiyo dhinacyada loollanka adag uu u dhaxeeyo.
Dhammaan xubnaha wakiilada Beesha Caalamka waxay soo dhaweeyeen doorka Midowga Afrika ee dhexdhexaadinta. Sidoo kale golaha Amniga iyo Nabadda ee Midowga Afrika ayaa isla gartay baahida loo qabo in sarkaal sare loo magacaabo dhexdhexaadinta Soomaaliya.
Dowladda Masar ayaa soo jeedisay Caamir Muusaa, guddoomiyihii hore ee Jaamacadda Carabta. Madaxweyne Farmaajo ayaa isna u ololeenaya Hailemariam Desalegn, Raiisel Wasaarihii hore ee Itoobiya ama sarkaal Eritereeya ah.
Nigeria, Ghana iyo kuwa kale waxay soo jeediyeen Earnest Bai Koroma, madaxweynihii hore ee Sierra Leone. Xubnaha badankood way taageereen soo jeedintantan, waxaana la filayaa in madaxweynaha Koongo uu dhawaan usoo magacaabi doono ergayga Gaarka ah ee loo xilsaarayo arrimaha Soomaaliya.